Audio Notibhuku, yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Audio Notibhuku, yemahara kwenguva shoma
MuApp Store tinogona kuwana nhamba hombe yekushandisa iyo inotibvumidza kunyora ne iPhone yedu. Mazhinji acho anowirirana neiyo iPad asi kwete ese. Vazhinji vashandisi vanomanikidzwa kugadzirisa kana kunyora zvinyorwa pakufamba vasina nguva yekuenda kumba kana kuhofisi kupfupisa kurekodha. Kuzviita pane iyo iPhone zvakati omei nekuda kwezviyero zvechiso, kunyange zvichikwanisika. Zvisinei pane iyo iPad zvinonyanya kusununguka kuzviita asi pane izvi tinoda application kuti pamusoro pekutibvumidza kunyora makirasi edu, mabvunzurudzo, pfungwa kana chero uye izvo zvakare zvinokutendera kuti uite pane imwecheteyo application.
Kuyedza kugadzirisa dambudziko diki iri, muApp Store tinowana Audio Notebook application, application inosangana nezvatinoda patinorekodha asi zvakare inotitendera kuti tivateerere tichinyora zvinhu zvakakosha kwazvo. Audio Notibhuku ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye4,99 euros, asi kwenguva yakati rebei kurirodha mahara uye rinongowanikwa chete iro reIpad. Hatizive kuti ichi chipo chinogara kwenguva yakareba sei, nekuti kana iwe uri kuverenga ichi chinyorwa uye chakakukodzera, usazeze, kurodha pasi kuburikidza nedhata rako reti sezvo ichingori 5.6 MB.
Ichi chishandiso chakanakira vadzidzi vanopinda makirasi, misangano kune inotevera reel akanyanya kukosha mapoinzi mugwaro atinogona kugovera kuburikidza neemail. Uye zvakare, zvakare yakakosha kune vese avo vanofanirwa kuenda kunhamba zhinji yemisangano uye vanoda kunyora zvese misoro inokurukurwa zvakanyorwa.
Audio Notibhuku inotibvumidza kupatsanura marekodhi neruvara, zvinoenderana nedingindira ravo kuitira kuti zvive nyore kwazvo kuzviwana isu patinenge tichida kuita mubvunzo. Uye zvakare, zvinotibvumidzawo kuti tikurumidze kutamba kana tichida kuti zvimwe zvikamu zvenguva zvipfuure nekukurumidza.
Qrayon Audio Notibhuku5,99 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Audio Notibhuku, yemahara kwenguva shoma
Kusvika kuzvikwata zvishanu zvakasiyana zvinenge zvichishanda pakutsvaira zvisina waya kweiyo iPhone 8
Iyo yazvino Gboard yekuvandudza inounza isu nyowani emojis uye izwi kududzira pakati pezvimwe zvitsva